3 minamato ine simba yekudzosera basa rako. ?
3 minamato ine simba kuti adzore basa racho. Basa rinogara riri chikonzero chekunetsekana, kunyangwe kune avo vakarasikirwa nebasa ravakanyanya kufarira. Mubvunzo "asi chii chandakatadza?" Hazvisi kuyambuka pfungwa dzedu uye tinokahadzika kugona kwedu. Asi chokwadi ndechekuti, kazhinji chikonzero chekuti layoff chaive chisina chekuita newe uye chakaitika nekuda kwezvikonzero zvinopfuura kwako kuzvidzora. Iyo scam yakaoma uye yakaoma kufungidzira, saka tinoda kukupa iwe kushoma simba kuti udzore rako rakarasika basa. Tarisa tarisa matatu ane simba-kudzoka-kubasa mitsara kuti ikubatsire pane kuda kwako kuti udzoke kubasa rako rekare.
1 3 minamato ine simba kuti adzore basa racho
2 Munamato kuti udzorere basa pamwe nekureverera kwevatsvene vanoverengeka
3 Munamato wekupora basa pamwe nekureverera kweSan Antonio
4 Munamato kuti udzorere basa pamwe nekureverera kweSt. Cyprian
Onawo zvimwe zvirimo pane tsitsi, tsika neminamato ye nyika basa:
Munamato kuti udzorere basa pamwe nekureverera kwevatsvene vanoverengeka
Ah! Vanodiwa Amai Mai Vedu Aparecida Oh Rita Dzvene reCassia Oh My mbiri Mutsvene Judha Thaddeus, mudziviriri wezvikonzero zvisingaite. Santo Expedito, mutsvene weminiti yekupedzisira uye Saint Edwiges, mutsvene wevanoshayiwa Pindirana naBaba kwandiri (ndipe zita rako rizere) ndinomukumbira kuti andibatsire kudzokera kubasa rangu kuitira kuti vagogona kundishevedza zvakare, nekukurumidza. Ndinokudzai nekukurumbidzai nguva dzose ndichakukotamirai. Namata: 1 Baba Vedu uye 3 Shiri dzeGungwa Ndinovimba Mwari nesimba rangu rese uye ndinomukumbira kuti avhenekere nzira yangu neupenyu hwangu, Ameni.
Taura izvi munamato kwemazuva matatu mumutsetse, kana zvichibvira panguva imwe chete. Sarudza zvakare nzvimbo ine runyararo uye ine runyararo pausingazovhiringidzwa, kuitira kuti ugone kutarisa nezve chinangwa chako nenzira yakanaka uye ne kutenda uye chokwadi chekuti Nyasha idzi dzinowanikwa.
Munamato wekupora basa pamwe nekureverera kweSan Antonio
«Kana iwe uchida zvishamiso, Enda kuSan Antonio, Uchatiza kubva kuna dhiabhori Uye iyo miyedzo yemoto. Dzorera rakarasika Iyo jeri rakaomarara raputswa, Uye pakukwirira kwedutu Ipa nzira kugungwa rine nyonganiso. Kuburikidza nekureverera kwako Denda, iko kukanganisa, rufu anotiza, Vasina simba vanova nesimba Uye vanova vanorwara vane hutano. Tora izvo zvakange zvarasika ... (dzokorora katatu) Zvese zvakaipa zvevanhu Moderate, dzokera shure, Tiudze isu kuti ndiani akazviona; Saka taura Paduan. Tora izvo zvakarasika… (dzokorora katatu) Kubwinya kuna Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Sezvazvaive pakutanga, ikozvino uye nguva dzose Ameni. Tora izvo zvanga zvarasika… (dzokorora katatu) V. Tinyengeterere, Akaropafadzwa Mutsvene Anthony. A. Ngativei vakakodzera kuvimbiso dzaKristu. Tora izvo zvakarasika… (dzokorora katatu) Namata Baba Vedu uye Rumbidza Maria.
Taura izvi munamato wezuva nezuva kana sezvinodiwa, uye vhenekera kenduru yekutenda kuna Saint Anthony kana nyasha dzawanikwa. Saint Anthony ndiye Musande uyo watinofanira kukumbira chimwe chinhu chakarasika, kuti iwe ugonewo kushandisa izvi munamato werudo, chinangwa, mari kana chero mamiriro ezvinhu anoda kudzoreredzwa.
Munamato kuti udzorere basa pamwe nekureverera kweSt. Cyprian
“Santo Antonio muti weMandingo, Santo Onofre muti weMirongueiro. Oo, o, musande wangu wekuCypriot ... Mutema murume anoziva kuroya zvakanaka.Izviite wakanyarara, anongotaura zvishoma uye anopenga! ”San Cipriano, maita basa. Kuti mukana wekuti (nditaure zita rako rizere) ndiwane basa randinoda (taura zita rekambani yako) mukuru pane vanhu vangani vanoverenga iyi meseji! Saint Cyprian, muroyi uye muKristu, akarurama uye akaipa, anoziva uye ane mukurumbira muhunyanzvi hwake hwechitendero, ndinoshevedzera kwauri nemoyo wangu wese, muviri, mweya uye hupenyu kuzadzisa chinangwa chekudzorera basa iri (taura zita rekambani). Ndinokumbira masimba ese epamusoro eUtatu Hutsvene, masimba egungwa, mweya, moto, zvisikwa uye zvakasikwa kuti basa iri riwire mumaoko angu uye risungwe zvakakwana neni (taura zita rako rizere). Dai iri basa ku (zita rekambani yenyika) rive rangu nariini, pasi peiri SIMBA RITSVENE basa iri harigone kuve remumwe munhu kunze kwangu (taura zita rako rizere). Rega mukuru anoshandira arege kuona vamwe vamiriri kunze kwangu (taura zita rako rizere). Chero bedzi maneja wekuhaya asingandishevedze (taura zita rako rizere) kukuudza kuti basa nderangu, havazofare uye pese pavanonzwa zita rangu (taura zita rako rizere) vanozove nechokwadi chekuti ndini munhu wekutaurirana naye . basa Rinoshamisa mbudzi yakakwira gomo, ndiunzire iro basa (ngatitaure zita rekambani) iro randinoda uye ndinoshuvira. Ngazvive zvakadaro, zvichaitwa, zvichaitwa. Ndinotenda uye ndichave nebasa randinoda kubva kwandiri (ndipe zita rako rizere) zvachose ”.
Izvi munamato une simba kwazvo uye inofanira kuitwa munguva 3 mazuva panguva imwe chete nekutenda kukuru uye positivity! Tora maminetsi mashoma ekufungidzira hupenyu hwako mune ichi chitsva chokwadi, nemufaro wose uyu kudzoka kubasa rekare uchakuunzira. Kana iwe wakanyatsotsunga kuti kudzokera kubasa rako rekare ndiyo yakasarudzo yakanakisa, tarisa iyo yegumi neyepenzi tsika kuti uwane basa rako uye zvakare simbisa chikumbiro chako.